Zvirimwa vs Zombies 2 inogadziridzwa nematunhu matsva | IPhone nhau
Kubva nezuro gadziriso nyowani yemutambo inowanikwa muApp Store Zvirimwa vs Zombies 2 yePopCap, mumwe wemitambo yakanakisa iriko parizvino ye iPhone neIpad iyo, pamusoro pekusarudzwa semumwe wemitambo yakanakisa ya2013, inopindawo muchinzvimbo che akanakisa esarudzo mitambo inowanikwa yeIOS.
Kutenda vhezheni 2.5.1 yePlants vs Zombies 2, mutambo unogashira yakazara Gumi matsva nhanho uye maviri matsva pasi iyo yaunogona kutanga nayo kudzivirira ndima yako kubva kumafungu evavengi. Iwo maZombies anogashirawo matatu matsva ekuvandudza mauto avo: Zombie Wizard, Zombie King, uye Zombie Chiremba.
Rangarira kuti Zvirimwa vs Zombies 2 mutambo wakasununguka uri zvekare inowirirana ne iPhone uye iPadEhe, iyo freemium marongero aripo kune avo vanoona zvichinetsa kufambira mberi kumatanho matsva kana vanosarudza kuwana zvirimwa zvitsva nekubhadhara mari. Kunyangwe zvakadaro, ndeimwe yemitambo yakakurudzirwa kuti unakirwe muzhizha rino kana usati wambozviedza.
Kana iwe uchida kunakidzwa neiyo nyowani Zvirimwa vs Zombies 2 kugadzirisa, unogona kurodha pasi mutambo wacho zvakananga kubva kuApp Store nekutinya pane inotevera link:
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Zvirimwa vs Zombies 2 inogadziridzwa nematunhu matsva
Ndakagara ndichifarira mutambo uyu ...
asi… hauna kushambadzira zvimwe zvidzoreso?
Uye chimwe chinhu… Hazvina kukosha here kuti Activator yabuda mune yayo beta vhezheni, yakaitika nezuro kana nezuro wacho? Ini ndoti huh?
Kana ivo vakaburitsa zvimwe zvakagadziridzwa zvezvirimwa vs zombies 2 (zvirinani parizvino ipad / iphone ndaona akati wandei). Kune rimwe divi, ini ndinonyanya kufarira kuvandudzwa kwePVZ2 pane iyo activator yandisingashandise, saka sekuona kwako inyaya yemafungiro ...
Ini ndinofunga izvo zvinodiwa hazvisi zvakanaka ... Zvimwe kurudziro kana toni kana uchizviita zvakakosha!
Mhosva yangu chete yave yekuda.